Ny momba ny cryptocurrencies: Bitcoin, Ether, Litecoin, .. ICO, varotra
Ny momba ny vola crypto: Bitcoin, Ether, Litecoin,…
Bitcoin, Ether, Litecoin, Monero, Faircoin… efa ampahany fototra amin'ny tantara ara-toekarena manerantany izy ireo. Blockchain, poketra, porofon'ny asa, porofon'ny tsatòka, porofon'ny fiaraha-miasa, fifanarahana marani-tsaina, fifandimbiasana atomika, tambajotra tselatra, fifanakalozana, … ny tsy mahay mamaky teny sy manoratra 4.0.
Amin'ity habaka ity mandinika tsara ny zava-misy amin'ny vola crypto izahay, maneho hevitra momba ny vaovao miavaka indrindra izahay ary asehoy amin'ny fiteny azo idirana ny tsiambaratelon'ny tontolon'ny vola itsinjaram-pahefana, ny teknolojian'ny rojo fanakanana sy ny fahafahany saika tsy misy fetrany.
1 Inona no atao hoe Blockchain?
2 Inona no atao hoe cryptocurrency?
3 Ny vola crypto lehibe
4 Kitapo na poketra
5 Inona ny fitrandrahana?
6 ICO, fomba vaovao amin'ny famatsiam-bola tetikasa
Blockchain na rojo sakana dia iray amin'ireo teknolojia manakorontana indrindra amin'ny taonjato faha-21.. Toa tsotra ny hevitra: angon-drakitra mitovy zaraina amin'ny tambajotra itsinjaram-pahefana. Na izany aza, izany no fototry ny paradigma ara-toekarena vaovao, fomba iray hiantohana ny tsy fiovaovan'ny vaovao, mba hahatonga ny angon-drakitra sasany ho azo idirana amin'ny fomba azo antoka, mba hahatonga izany angon-drakitra izany ho tsy azo rava ary na dia afaka manao fifanarahana marani-tsaina aza. tanteraka tsy misy fahadisoan'ny olombelona ny fepetra. Mazava ho azy, ny demokrasia ihany koa ny vola amin'ny alàlan'ny famelana ny famoronana vola crypto.
Inona no atao hoe cryptocurrency?
Ny cryptocurrency dia vola elektronika izay ny famoahana, ny fandidiana, ny fifampiraharahana ary ny fiarovana dia aseho mazava amin'ny porofo kriptografika. Ny cryptocurrencies mifototra amin'ny teknolojia Blockchain dia maneho endrika vaovao amin'ny vola voatokana izay tsy misy manam-pahefana ary azo ampiasaina tahaka ny vola efa fantatra hatramin'izao izay misy tombony maro. Ny vola crypto dia afaka mahazo ny sanda omen'ny mpampiasa azy ireo, mifototra amin'ny famatsiana sy ny fangatahana, ny fampiasana ary koa ny soatoavina fanampiny an'ny vondrom-piarahamonina mampiasa azy ireo ary manangana tontolo iainana manodidina azy. Ny cryptocurrencies dia eto hijanona sy ho lasa ampahany amin'ny fiainantsika.
Ny vola crypto lehibe
Bitcoin no cryptocurrency voalohany noforonina avy amin'ny Blockchain azy manokana ary, noho izany, no malaza indrindra. Izy io dia noforonina ho fomba fandoavana sy fampitana ny sanda izay mora ampiasaina, haingana, azo antoka ary mora. Koa satria loharano misokatra ny kaody, dia azo ampiasaina sy ovaina izy io mba hamoronana vola crypto maro hafa miaraka amin'ny toetra hafa ary, matetika, miaraka amin'ny hevitra sy tanjona hafa mahaliana kokoa na tsy dia mahaliana. Litecoin, Monero, Peercoin, Namecoin, Ripple, Bitcoin Cash, Dash, Zcash, Digibyte, Bytecoin, Ethereum… ny sasany amin'izy ireo fa misy an'arivony. Ny sasany dia mifandray amin'ny tetikasa fatra-paniry laza kokoa mifandraika amin'ny teknolojia izay manova ny fomba fiasantsika ny vaovao, angona ary na dia ny fifandraisana ara-tsosialy aza. Misy mihitsy aza ireo navoakan'ny governemanta, izay lazaina fa vahaolana amin'ny olan'izy ireo ara-toekarena, toy ny Petro navoakan'ny governemantan'i Venezoelà ary manohana miaraka amin'ny tahirin-tsolika, volamena ary diamondra. Ny hafa dia ny volan'ny hetsika fiaraha-miasa manana toetra tena manohitra ny kapitalista ary manorina tontolo iainana ara-toekarena tetezamita mankany amin'ny antsoiny hoe vanim-potoana post-kapitalista, toa an'i Faircoin. Saingy misy mihoatra lavitra noho ny hevitra ara-toekarena manodidina ny vola crypto: tambajotra sosialy izay manome valisoa tsara indrindra amin'ny alàlan'ny cryptocurrency azy manokana, tambajotra fampiantranoana rakitra voatokana, tsenan'ny fananana nomerika… saika tsy misy farany ny fahafaha-manao.
Kitapo na poketra
Mba hanombohana hifaneraserana amin'ny tontolon'ny cryptocurrencies dia mila rindrambaiko kely fotsiny ianao, fampiharana izay ampiasaina handraisana sy handefasana an'ity na ity cryptocurrency ity. Ny poketra, ny poketra na ny poketra elektronika dia mamaky ny firaketana ny Blockchain ary fantaro hoe inona ny fidirana kaonty mifandraika amin'ny fanalahidy manokana izay mamaritra azy ireo. Izany hoe, ireo fampiharana ireo dia "mahafantatra" ny isan'ny vola madinika anao. Amin'ny ankapobeny dia tena mora ampiasaina izy ireo ary rehefa takatra ny lafiny fototra indrindra amin'ny fiasan'izy ireo sy ny fiarovana, dia lasa banky tena izy ho an'ireo izay mampiasa azy ireo. Ny fahafantarana ny fomba fiasan'ny poketra elektronika dia tena ilaina mba hiatrehana ny ho avy izay efa eto.
Inona ny fitrandrahana?
Ny harena ankibon'ny tany no fomba nanamboarana ny vola crypto. Hevi-baovao iray izy io saingy mitovitovy amin'ny fitrandrahana nentim-paharazana. Raha ny momba ny Bitcoin, dia momba ny fampiasana ny herin'ny solosaina hamahana olana matematika ateraky ny code. Toy ny hoe mitady tenimiafina amin'ny alalan'ny fanandramana misesy ny litera sy isa. Rehefa avy niasa mafy ianao, dia mahita izany, bloc dia noforonina miaraka amin'ny vola madinika vaovao. Na dia tsy ilaina aza ny mahafantatra na inona na inona momba ny harena ankibon'ny tany amin'ny fampiasana cryptocurrencies, dia hevitra iray tokony ho fantatrao ny tenanao mba hananana kolontsaina crypto marina.
ICO, fomba vaovao amin'ny famatsiam-bola tetikasa
ICO dia midika hoe Initial Coin Offering. Fomba iray ahafahan'ny tetikasa vaovao ao amin'ny tontolon'ny Blockchain mahita famatsiam-bola. Ny famoronana mari-pamantarana na vola nomerika izay hamidy mba hahazoana loharanon-karena sy hamolavola tetikasa sarotra kokoa na tsy dia sarotra loatra dia lohahevitra tanteraka. Talohan'ny nipoiran'ny teknolojia Blockchain, ny orinasa dia afaka mamatsy vola ny tenany amin'ny famoahana ny ampahany. Amin'izao fotoana izao dia saika ny olona rehetra dia afaka mamoaka ny volany manokana amin'ny fanantenana fa hahita fahafaha-manao mahaliana ny olona amin'ny tetikasa tiany hamolavola ary hanapa-kevitra ny hampiasa vola amin'izany amin'ny fividianana sasany. Endriky ny famatsiam-bola ho an'ny vahoaka izany, ny demokrasia ny loharanon-karena. Ankehitriny dia azon'ny rehetra atao ny mandray anjara amin'ny tetikasa mahavariana na dia, noho ny tsy fisian'ny fitsipika aza, dia azo atomboka ny ICO izay ny tetikasany dia hosoka tanteraka. Tsy sakana anefa izany mba hampitodika ny masonao amin’ny lafiny hafa; misy ny mety hahazoana fiverenana tsara na dia amin'ny fampiasam-bola kely dia kely aza. Ilaina fotsiny ny mianatra bebe kokoa momba ny tsirairay amin'ireo hevitra ireo. Ary eto dia holazainay aminao ny mahaliana indrindra aloha.